Namadika Palitao i Jack Ma, Ilay Mpanapitrisa, Ary Niarahaba Ny Governemanta Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2013 10:59 GMT
Simba teo imason'ny olona ny laza maha-tsy mpandany an'i Ma Yun (马云), ilay Shinoa malaza Mpandraharaha amin'ny Aterineto, fantatra amin'ny anarana hoe Jack Ma, nandritra ilay fanadihadiana nataonà gazety iray azy, izay niderany an'i Shina nohon'ny fisivanana anaty aterineto sy herisetra ataony ary ireo tetika fampiasan-keriny.
Ilay mpanapitrisa Jack Ma, izay mpitantana sehatra roa fanaovana varotra anaty aterineto, Taobao sy Alibaba, dia nanamafy tao amin'ilay fanadihadiana nataon'ny South China Morning Post taminy tao Hong Kong fa “tena mampitolagaga tsy misy toa azy ny governemanta Shinoa” ary nampitaha an'i Shina amin'ny fiandrianany ao amin'ny fandraharahany, tamin'ny filazany fa tsy maintsy noraisina reo fanapahan-kevitra hentitra toy ny tamin'ny 04 Jona [zh] noho ny fikatsahana filaminana. Nidera ny fahambonian'ny lentan'ny fisivanana ao Shina ihany koa izy, izay afaka manara-maso mpampiasa aterineto maherin'ny 600 ary fahatelo na fahaefatra amin'ireo sampan-draharaha aterineto folo voalohany lehibe indrindra manerana izao tontolo izao. Ireo bala Anglisy mikasika ilay fanadihadiana dia azonao jerena ao amin'ny Vohikalan'ny Morning Post.
Jack Ma Yun nandray fitenenana tamin'ilay fihaonambe ara-toekarena maneran-tany fanao isan-taona izay ataon'ireo Tompondaka Vaovao ao Tianjin, Shina Septambra 2008. Sary nalain'i Natalie Behring, Fihaonam-be Ara-toekarena Maneran-tany (CC: BY-NC-SA)
Tsy toy ilay andian-taranaka mpanankarena faharoa aty aoriana, na Fuerdai amin'ny teny Shinoa, i Ma dia nanangana ny orinasany tanaty aterineto nampian'ireo namany avy any Etazonia ary nalaza ho mpandraharaha tsy miankina tao Shina. Alibaba.com dia tafiditra ao amin'ny lisitr'ireo tsenam-pifanakalozana ao Hong Kong Stock Exchange ny taona 2007.
Mampitolagaga sa mahatahotra ?
Maro ireo mponina anaty aterneto no diso fanantenana sy mametra-panontaniana hoe nahoana i Ma no nisafidy hanimba ny lazany. Tao amin'ny tsanganana natao ho fanehoan-kevitra tao amin'ny Beijing News, ao amin'ny vohikalan'ny Sina Weibo, dia maro ireo nino fa ny fiovan'ny fihetsik'i Ma dia misy ifandraisany amin'ilay famonoana ho faty an-tsokosoko an'ilay mpandraharaha Shinoa Zeng Chengjie nomena ny solon'anarana hoe “Madoff-n'i Shina” ary efa nantsoin'ny famoaham-baovao tantanan'ny fitondrana Shinoa hoe “lehilahy matotra, hendry ary lehilahy misaina”.
“Iam Wang Mo” (@是王默俺) dia isan'ireo mpitoraka bilaogy kiritika nampifandray ny fiovan'ny fihetsik'i Ma sy ny fahafatesan'i Zeng :
Hatramin'ny voalohany izy no efa niaraka tamin'ny elatra havanana. Ankehitriny anefa izy mihazakazaka mitanjaka tsotra izao. Nampangorohoro azy i Zeng Chengjie.
“Bright moon on top of Yan's mountain” (Volana manjopika an-tampon-tendrombohitr'i Yan) (@燕山明月) ihany koa dia nino fa nampangorohoro fatratra an'i Ma ny fahafatesan'i Zeng :
Taobao dia fandraharahàna goavana iray ary Alibaba kosa dia orinasa lehibe. Mpandraharaha lehibe i Ma Yun. Kanefa dia mameno ny fon'i Ma loatra ny tahotra. Mijoro amoron-tevana, azo renesina eny amin'ny rivotra ny feon'i Zeng Chengjie. Feno tahotra ny fony ka mijery any aoriana izy, mitsiky ny zokiny lahy mibanjina mijery azy.
Maro ihany koa ireo nino fa nanao fifampiraharahana tamin'ny devoly i Ma, ary amin'ny fanaovany fifanarahana maromaro amin'ny Chinese Communist Party (CCP) na ny Antoko kominista Shinoa hahazoan-dry zareo manara-maso mivantana ny fandraharahàny mba mihazona ny fiparitahany :
鹿魜 : 2013年度优秀企业家阿里巴巴啃腚还是优秀D支部!
“Lu Ren” : Ilay mpandraharahan'ny taona 2013! dia ho lasa sampan-draharaha mendrika indrindra ao amin'ny CCP ny Alibaba.
吴刚梁：全是歪理邪说。百度“很成功”，谷歌要“反省”，反省什 么？向官员行贿？像你一样搞政治投机、迎合权贵？为何谷歌在全世界都能成功，唯独在中国弄不下去？而百度就只能在中国逞能？这是一个“逆向淘汰”的市 场，13亿人当然能够支撑起几家大的互联网公司，但让谁出头，决定权在政府。
Wu Gangliang : Feno hevitra hafahafa ny tafatafa natao tamin'i Ma. Baidu dia “tena mahomby tokoa” raha toa ny Google ka mila “misaina”. Inona marina moa no tsy maintsy hosainina amin'izany ? Hoe tsy nanome tsolotra ny manampahefana izy io? Hoe tsy nirotsaka tamin'ny resaka politka sy nahafaly ny sangany eo amin'ny fitondràna? Nahoana ny Google no mahomby manerana izao tontolo izao nefa tsy velona ao Shina ? kanefa dia ao Shina irery ihany no ahazoan'i Baidu tsena ? Tsena mivadika izany io. Mazava fa afaka ny hizaka Aterineto goavana vitsivitsy io làlam-barotra io, amin'ny fisian'ny mponina 1.3 lavitrisa ao aminy, kanefa izay rehetra mahomby dia noho ny fanapahan-kevitry ny governemant irery ihany.
@amanart : Vohikala miasa tsara anaty toerana feno “teny Shinoa” fotsiny ianareo. Raha toa ka afindra any Eoropa ny vohikalanareo, dia halemy eo… Tena nandiso fanantenana ahy iny teninareo androany iny. Voaporofo ankehitriny fa ny tena zava-doza indrindra mety hahazo ny olona iray dia ny fiovan'ny toetra sy ny foto-kevitra hijoroany noho ny fandrahonana azy.
@”Chrysanthemum nipatitaka”: … Tsy hisalasala ny amin'ny Q.I an'i Ma Yun mihitsy aho, misy antony nilazàny izany. Ny antony tena nampandeha ilay toeram-pisakafoanana an-tsekoly dia satria noana ny ankizy rehetra ka voatery mihinana ao.
Ivelan'ilay Rindrimbe Aro-afo (Great Firewall), efa maherin'ny 300 ireo Shinoa liberaly mpanao politika avy any amin'ny tanibe sy avy any ivelany no niara-nanao sonia fanambaràna iray izay manameloka ny resak'i Jack Ma mikasika ilay fanapahan-kevitra “jadona” sy “manara-dalàna” tamin'ilay Famoretana ny 04 Jona 1989 ary nitaky an'i Ma hanao fialantsiny ampahibe maso. Ity manaraka ity ny kisarisary politika nataon'ilay mpampiasa Twitter @badiucao, izay nahitana ny solon'anaran'i Ma amin'ny teny Shinoa “馬” izay novàna ho fiara mifono vy:
Natao ho toy ny fiara mifono vy ilay Shinoa fanta-daza “Ma” tao amin'ny kisarisary politikan'i @badiucaos.